Mr. Chef ( Kyauktada Branch ) | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Mr. Chef ( Kyauktada Branch ) | Kyauktada
တရုတ် အစားစာ / ၈ျပန် အစားစာ / ထိုင်း အစားစာ
Mr. Chef ( Kyauktada Branch ) ကတော့ လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ် ခန့်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Mr.Chef restaraunt ဆူးလေဆိုင်ခွဲသည် (၇)ဆိုင်မြောက်ဆိုင်ခွဲသစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်၏တည်နေရာမှာ ရှေ့ဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံကြား၊ ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ရှေ့ ကျောက်တံတား မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ၉ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီအတွင်းဖြစ်သောကြောင့် မနက်စာ၊ နေလည်စာ နှင့် ညစာကို အဆင်ပြေစွာစားသုံးနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်မှာရရှိနိုင်တဲ့ အစားအစာများကတော့ တရုတ်အစားအစာ၊ ဂျပန်အစားအစာ၊ ထိုင်းအစားအစာ နှင့် ကိုရီးယားအစားအစာ များဖြစ်ပါသည်။ စားဖိုမှူးထမင်းကြော်၊ အမေရိကန်ထမင်းကြော်နှင့် ပြည်လုံးချမ်းသာထမင်းကြော်တို့ ကတော့ဆိုင်ရဲ့ အထူးဟင်းလျာများဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာတော့ စားသုံးသူ ၄၀ ခန့် ဝင်ဆံ့ပြီး Group များ ၊ မိသားစု ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် သက်တောင့်သက်သာစားသုံးနိုင်သော နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ် အစားစာ | ၈ျပန် အစားစာ | ထိုင်း အစားစာ
ထမင်း နှင့်ဟင်းလျာ | ရှမ်း အစားစာ | အီတလီစတိုင်ခေါက်ဆွဲ | ပီဇာ
စုံတွဲ | အဖွဲ့လိုက်၊ပါတီ | ကလေး
No .232, Ground Floor , East Hotel , Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp . Yangon